Voatafika h@ fiara mifono vy | news2dago |
Voatafika H@ Fiara Mifono Vy
news2dago 27 Aprily, 2009 09:57 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Amiko manokana aloha dia tsy ahoako akory na tapitra may ao ary ny fiara mifono vy rehetra an'ny tafika (malagasy) izay tsy mendrika akory satria mpamono malagasy no asany h@ izay tsy nisy mpananim-bohitra mba lavon'izay tafika izany teto fa toa mpamosavy malemy ka ny ato antrano ihany no aripaka.
Fa efa sahy mihitsy koa aloha ilay mpanafika ny kazerina satria tsy vao ela fa t@ asabotsy teo ihany koa no nahalavo miaramila iray kamio ry zalahy iny izy hivoaka ny tonelina ambohidahy iny no nisy nanipy grenady tonga dia taraiky ny iray kamio. Eny @ hopitaly eny soavinandrina ny akamaron'ireto miaramila ireto ankehitriny.
Midika izany fa tsy misy fandriam-pahalemana velively eto madagasikara vao maika aza mikorotana. Satria dia saika isan'andro no ahenona olana maty voatifitra, fiara may, trano may ary olona voasambotra sy gadraina.
Etsy andanin'izay dia tonga eto Madagasikara t@ asabotsy teo ingahy Rajaonarivelo Pierrot! Nisahotaka ny eo anivon'ny FAT tsy nampoiziny mantsy oe ho sahy izy ka efa manomboka mitsikera ihany koa. Maro fahavalo loatra ity fitondrana ity ka asa na hateza na tsia.
Miandry izay zavatra hiseho androany indray ny rehetra ny malaza aloha dia feno manao barazy ny tanana ka sahirana ny mpifamoivoy. Tsy fantatra rahateo na iza na iza no manao itony barazy itony.
Farany kosa dia mbola mandeha ihany ny radio mada na efa natao haza lambo aza ny fitaovana. Midika izany fa misy olona tsara sitrapo foana manome fitaovana sy mampiatrano azy.